PVC xumbo-saareyaasha & shirkado - Shiinaha PVC xumbo Factory
5mm Celuka PVC Guddiga Xumbo
5mm celuka PVC guddiga xumbo waa nooc ka mid ah Guddiga Xumbo PVC, kaas oo ay soo saartay by nidaamka celuka oo lagu sameeyay iyada oo loo marayo madal lagu hagaajiyo. Guddiga Celuka PVC wuxuu leeyahay dusha sare, dusha qolof dusheeda, taasoo ka dhigaysa xaashida mid adag, sii waara oo sidaas awgeedna sii waarta.
8mm guddiga xumbo PVC
8mm PCV guddiga xumbo waa faahfaahinta ah guddiga xumbo PCV celuka, sidoo kale iska leh guddiga xumbo PVC. Qaado chloride polyvinyl sida sheyga ceyriin ee ugu muhiimsan, kudar wakiilka xumbada, ololka retardant iyo wakiilka gabowga, iyo inaad qaadato qalab gaar ah oo loogu talagalay wax taaj oo kale. Midabada guud waa cadaan iyo madow.
Waxaan leenahay warshad madax-bannaan, taas oo naga dhigaysa mid aad u xirfad badan soosaarka guddiga xumbada.
12mm xaashida xumbada PVC balaarisay
Boodhka balaastiiga ah ee la balaariyay waa xaashi PVC qafiif ah oo adag oo loo adeegsado codsiyo kaladuwan oo ay kujiraan calaamado iyo bandhigyo, soo bandhigid waababyo, sawir qaadid, qaabeynta gudaha, heerkulbeegga, noocyada, qaab sameynta, iyo waxbadan oo dheeri ah.
18mm la ballaariyey guddiga PVC
18mm guddiga balaariyay PVC waxaa sidoo kale loo yaqaan board board xumbo PVC iyo alwaaxa board xumbo PVC, mid ka mid ah guddiga xumbo PVC ama sheet xumbo PVC.
25mm guddiga celuka
Guddiga xumbada 25mm waxaa iska leh guddiga celuka, gudaha 1-30 mm PVC guddiga xumbada waxaa iska leh guddiga dhumucda, sidaas darteed guddiga dhumucdiisu waxay ku habboon yihiin alaabta guriga, dhismaha, qurxinta iyo howlaha banaanka.
20mm PVC alwaaxa guddiga xumbo
guddiga xumbada pvc celuka waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa Warshadaha Furniture, Warshadaha Xayeysiinta iyo Codsiyada Gudaha & Dibadda.
Gudiga PVC-ga madow
Guddiga xumbada PVC waa shay adag oo haddana miisaanka yar oo badanaa loo isticmaalo bandhigyada POP, calaamadaha, looxyada bandhigga iyo codsiyada aan culeyska saarin. Qaab dhismeedka unugyadiisa oo isdaba joog ah awgood, waa substrate wanaagsan oo daabacaadda dhijitaalka ah, daabacaadda shaashadda, ranjiyeynta, xardhay iyo xarafka vinylka.
guddiga xumbo PVC
Gudiga xumbada cad ee PVC waa mid tayo sare leh, oo si xarago leh u samaysan loox PVC / xaashi. Waxaa lagu heli karaa midab cad, kaas oo caan ka ah suuqa caalamiga ah, wuxuu ku jiraa matoor iyo dhaldhalaal dhalaalaya oo cabirrada la xushay ah. Waxay leedahay iska caabin UV u fiican.